कम्युनिष्ट : काम गर्दैनन् - भ्रष्टाचार मात्रै गर्छन ! - Ujyaalo TImes - Same Vision, Different Angles
कम्युनिष्ट : काम गर्दैनन् – भ्रष्टाचार मात्रै गर्छन !
२०७६ असार १५ गते आइतवार
ने ज स पश्चिम् भारत क्षेत्रका महासचिव प्रेमराज पुरीले कम्युनिष्टहरु भ्रष्टाचार गर्नकै लागि सत्तामा जाने गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले जनताको पक्षमा कहिँलै काम गरेनन् मात्र भ्रष्टाचार गरे पुरीले भने । अहिले पनि दुईतिहाइको दम्भ देखाउदै जनताका आधारभुत आबश्यकता पुरा नगरे कुनै दिन – यी नेपाली कम्युनिष्टहरुलाई संग्रहालयमा देख्नुपर्ने उनले बताए ।
उनले अहिलेसम्म भ्रष्टाचारका सबै काम कुरा कम्युनिष्टहरुको सरकार भएको बेलामा भएको दाबी गरे । उनले काङ्ग्रेस नैतिकवान् र इमान्दारको पार्टी भएको भन्दै सबैलाई अन्य पार्टी छोडेर काङ्ग्रेसमा लाग्नका लागि आग्रह गरे ।कम्युष्टिहरु एक दशक सत्तामा रहदा देश बर्बाद भएको स्मरण गर्दै भने ०६–६३ को आन्दोलनपछि सबैभन्दा धेरै वामपन्थीहरु सत्तामा बसेकाले देशको दुरावस्थाको जिम्मा उनीहरूले बढी लिनुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म भ्रष्टाचारका सबै काम कुरा कम्युनिष्टहरुको सरकार भएको बेलामा भएको दाबी गरे ।
ने ज स पश्चिम् भारत क्षेत्रका महासचिव पुरीले कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार हिन्दु धर्म मास्ने अभियानमा लागेको आरोप समेत लगाए। सरकार भ्रष्टाचार र अनियमिततामा लिप्त भएको बताएका छन् । प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई बृहत्त एकता गरेर सरकारको विरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘चाहे त्यो नेपाली कांग्रेस होस् या मधेसवादी दल अब हामी एक भएर सरकारको विरोध गर्नुपर्छ’,पुरीले भने ।